ADY AMIN’NY VALANARETINA CORONAVIRUS : "Aoka isika samy hanaja ny fepetra napetraky ny Fanjakana"
Lehilahy iray 59 taona, mpiasan’ny fahasalamana no namoy ny ainy vokatry ny valanaretina Coronavirus tao amin’ny Hopitaly Manarapenitra Morafeno Toamasina. 18 mai 2020
Tamin’ny sabotsy 09 mey lasa teo izy no nampidirina tao amin’ity hopitaly ity rehefa avy notsaboina nandritra ny efatra andro tao amin’ny hopitaliben’i Toamasina. Manoloana ny tranga tahaka izany indrindra dia niantso ny rehetra hanaja ny fepetra napetraky ny Fanjakana hisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina Coronavirus ny Depiote Rajaobelina Lova, filohan’ny vaomieran’ny fahasalamana eo anivon’ny Antenimieram-pirenena.
Nambaran’ity Depiote ity fa tokony ho samy handray ny andraikitra tandrify azy ny rehetra hahafahana manakana sy manafoana io aretina io ao anaty fotoana fohy. "Samy tompon’andraikitra amin’ny fiarovan-tena sy ny fiarovana ny hafa ny rehetra. Tokony ho samy mailo satria mbola misy ihany ireo tsy mino fa tena misy io aretina io no sady mahafaty raha tsy voatsabo ara-potoana", hoy ny nambarany.
Nanentana ireo rehetra voan’ny sery na mikohaka na koa misy fambara hafa mifandraika amin’ny valanaretina coronavirus koa ny Depiote Lova Rajaobelina mba hanatona Hopitaly faran’izay haingana hahafahan’ny mpiasan’ny fahasalamana mandray an-tanana ny fahasalaman’izy ireny. "Aretina tsy mahamenatra ny coronavirus satria efa azo tsaboina tsara eto amintsika. Tokony hanatona Hopitaly faran’izay haingana ireo izay miahiahy ny fahasalamany hahafahana mandray an-tanana azy. Sarotra ny fitsaboana raha sanatria ka tara vao manatona Hopitaly, indrindra ho an’ireo olona marefo sy misy aretina hafa mitaiza azy", hoy hatrany ny nambarany.
Nohamafisin’ny Dr Lova Rajaobelina koa fa efa mandray ny andraikitra rehetra tandrify azy ny Fanjakana amin’ny fiarovana ny fiparitahan’ny valanaretina sy ny fijerena ny sosialim-bahoaka. Ho zava-poana anefa izany rehetra izany, hoy hatrany izy raha toa tsy miara-mientana ny rehetra. Ho an’ny Distrikan’i Moramanga manokana, niantso ny mponina any an-toerana izy hanaraka an-tsakany sy an-davany ny fepetra efa napetraka. Ao anatin’izany ny fanaovana aron-tava rehefa mivoaka ny trano, fanasana tanana amin’ny rano sy savony, fanajana ny elanelana iray metatra sy ireo maro hafa. Tsiahivina fa isan’ireo faritra ahitana trangan’aretina betsaka i Moramanga noho izy manakaiky an’Ambatovy, toerana voamarina fa nahitana olona mitondra ny tsimok’aretina Covid-19.